IMac Pro njengoYilo lokuPhefumlelwa kwe-iPhone | Ndisuka mac
Ipatent entsha evunyiweyo yeApple ibonisa apho inkampani yeCupertino ikhoyo ngoku. Naluphi na uhlobo lobutsha luxhomekeke ekubeni nelungelo elilodwa lomenzi kwaye Uyilo lwecala leMac Pro lunokusetyenziselwa ukwenza imeko ye-iPhone.
Ngokucacileyo ezi ndidi zamalungelo awodwa omenzi wechiza luhlobo esingakhange silubone nje longezwa ngokuthe ngqo kwisixhobo kwaye kunjalo Ukuchukumisa kwale iPhone kuya kuba yinto engaqhelekanga. Ngayiphi na imeko, iApple sele ibhalisile uyilo kwilungelo lomenzi elifunyenwe ngu Ngokukhawuleza Apple.
Ngokusengqiqweni kunokuba yinto enomdla ukubususa ubushushu kodwa kungenzeki
Inyaniso kukuba i-chassis efanayo naleyo eyongezwe yi-Mac Pro kwi-iPhone inokuba yinto enomdla ngokwenyani malunga nokusasazeka kobushushu kodwa inecala elibi nayo. Kwaye kunjalo ubumdaka obunokungena phakathi kwale mingxunya ukuphatha i-iPhone epokothweni yakho okanye ubhaka kungangaphezulu. IMac Pro yikhompyuter yedesktop enokucocwa ngokugqibeleleyo ngelaphu, kodwa olu luyilo kwi-iPhone luya kuba nzima ngakumbi.
Akunakutshiwo ukuba uyilo lokugqibela ukumelana namanzi okanye uthuli ukungena Kwi-iPhone baya kuba yintloko yokwenene kubasebenzisi. Akugwetywanga ukuba iMac Pro enobungakanani obuncinci kunye noyilo lweMac Pro yangoku iya kubonakala kungekudala, into esinokuyilawula ngaphandle yi-iPhone yoyilo lwechassis.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IMac Pro njengoyilo oluphefumlelweyo lwe-iPhone
5nm Apple Silicon ebizwa M1X kwezi Macs zilandelayo